Steam inokutendera iwe kutamba mitambo yeWindows paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | chiutsi
Platifomu yaValve iri kubudirira zvikuru uye haisi yepasi nekuti inopa katarogu hombe yemitambo yemavhidhiyo yeGnu / Linux. Steam ine vhezheni yeWindows, macOS uye yeGnu / Linux kunyangwe zvichikwanisika mune remangwana risiri kure, panongova nepuratifomu imwe chete.
Sezviri pachena shanduro dzemberi dzeSteam dzichaita kuti zvibvire kuti mitambo yeWindows ishande paGnu / Linux. Ichi chiitiko chitsva chakaziviswa uye chatove chakaedzwa mune iyo Steam yekuvandudza vhezheni.Kufanana nevazhinji vashandisi veGnu / Linux vanoita, Steam inoshandisa Waini, emulator ichaita kuti mutengi aiswe mukati mayo kuitira kuti upe uku kutevedzera. Izvi zvichaita chero mutambo weWindows watinotenga kana kuti usable pane yeGnu / Linux komputa.
Izvo Valve inopa pamwe neayo Steam mutengi hachisi chinhu chitsva, asi zvinoita zvichaita kuti vashandisi vazhinji vasiye kutsemura misoro yavo pavanogadzira Waini yemitambo yako yaunofarira kushanda paGnu / Linux. Valve yatotaura kuti mitambo yakati wandei inowirirana neiyi Steam mashandiro uye kuti tinogona kuishandisa pane chero kugoverwa kweGnu / Linux.
Zvishoma nezvishoma, Steam ichaita yese mitambo yeWindows kushanda uye yakagadziridzwa kushanda paGnu / Linux, asi parizvino havazi vese. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti mukati meStam mutengi mune yayo yekuvandudza vhezheni ine sarudzo iyo inotibvumidza isu kumisikidza chero Windows mutambo uyo usiri mukati memitambo whitelist inoenderana zvizere, asi iyi sarudzo ichiri waini yakachena, ndiko kuti, inogona kana kusashanda.
Ini handinyatso kuziva kuti ndeapi mikana ichaburitswa nebasa idzva, ndiko kuti, kana ichizopa chimwe chinhu chitsva kune ecosystem iyo Waini isiri kupa, asi chero zvodii ichaita kuti vanopfuura mumwe mushandisi vatange kubvisa kutya kwePenguin chikuva, chimwe chinhu chisingasiye chichiva chakanaka Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam inokutendera iwe kutamba mitambo yeWindows paGnu / Linux
Zvakanaka, kutaura chokwadi, ini handingatenge mutambo ndichiziva kuti Linux haisi yemuno uye inofanirwa kutsamira padanho rekushandura iro rinogona kupa zvikanganiso uye kunonoka kuuraya kupfuura kwazvino. Ini ndinofunga kuti pamusoro pekuvandudza waini ivo vanofanirwa kuyedza kushandura kuLinux sezvakaita Loki Mitambo.
Isu tese tinoziva kuti izvo zvinoreva kuita kwakanyanya kuita uye kusangana pamwe neiyo Hardware. Ini ndinobvuma kuti makambani ekuvandudza anofanirwa kushanda pairi, kuti iyo Hardware inyatso shandiswa kune yakanyanya, uye zvakanyanya izvozvi kuti shanduko kuVulkan iri kutarisira, kana zvisiri, isu tinofanirwa kukanganwa nezve kusvika kupfuura 60fos muFHD.
Zvinondipa izvo izvo zvingagone kuitwa naSteam kusiya Steam vhezheni yeLinux, kana yakazara, iyo Steam vhezheni yeWindows inogona kuvashandira muWine. Kune makambani anoita izvi, sekune TeamViewer. Ndinovimba avo veSteam havaite zvakafanana.
Zvakanaka, zvinoita kunge zano rakanaka kwandiri, zvese zvinoenderana muchinjikwa-papuratifomu, gamuchirwa. Ndine mitambo kubva pandakanga ndiine windows paSteam uye zvingave zvakanaka kuti ndikwanise kuiisa yakananga kubva kuSteam pasina kurova waini zvakananga.
Kune rimwe divi, zviri pachena kuti kuchave nekurasikirwa kwekuita, asi zvinokwanisika kuti neramangwana vhezheni yewaini uye kana steam ikabatana mukusimudzira uye kugadzirisa kwayo isu tichava nekuvandudza kwakawanda mune izvi.
Union ita simba !!
Iwe uri kukanganisa nezve chinhu cheTeamviewer. Pane peji repamutemo vane shanduro dze linux mune zvese .rpm uye .deb.
Ndinoiisa pasina matambudziko muMageia 6 Plasma.
miguel angel rodriguez sumoza akadaro
Ini ndinoiona iri nhanho huru, nekuti vatambi rimwe zuva vaigona kumisa kuisa Windows kuti igove neGNU / Linux yakaiswa pamakomputa avo, kunyangwe chakanakira ndechekuti makambani anounganidzawo kugoverwa kweGNU / Linux sezvo nenzira iyi pane kuwirirana kukuru uye kugona zviwanikwa.
Pindura Miguel Angel Rodriguez Sumoza
Zoiper yemahara muchinjika-chikuva app yeVooP